Ama-Outliers: Indaba Yempumelelo | Martech Zone
UMsombuluko, May 4, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Njengoba bengilinde eyami indiza izolo, Ngikhumbule izinto ezimbili engizikhohliwe - ibhantshi lami lezemidlalo nenye yezincwadi ku izofundwa inqwaba.
Ngenhlanhla, isitolo esiseduze kwesango lami sasinokukhethwa kwencwadi okufanelekile futhi Ama-Outliers: Indaba eya empumelelweni, by UMalcolm Gladwell, wayekhona. Ngingumlandeli omkhulu kaMalcolm Gladwell - zombili ezihlokweni zakhe zaseNew Yorker nasezincwadini zakhe. Vuliwe IGladwell, Inkampani Esheshayo uyabhala:
Akekho enkumbulweni yakamuva oye wangena endimeni yomholi wokucabanga ngebhizinisi ngomusa noma ngomthelela njengoGladwell. Ngokushesha ngemuva kwencwadi yakhe yokuqala, iThe Tipping Point: How Little Things Can Make a Big umehluko (Encane, uBrown, 2000), yawela ezintendeni zezandla zaseMelika, uGladwell waqhamuka kumlobi wabasebenzi jikelele eThe New Yorker eya ekukhangiseni unkulunkulu.
Ama-Outliers awakho mayelana nokumaketha, noma kunjalo. Kumayelana impumelelo. UMalcolm Gladwell ungumbhali wezindaba omangalisayo - futhi uhlanganyela izindaba ezimangazayo, ezihlukile, zokunye okungajwayelekile emlandweni walabo abaphumelelayo. Incwadi ikhomba ezimeni lapho izimo zimane nje zihlelelwe impumelelo, ibuza inhlanhla ethintekayo, futhi isekela ukusebenza kanzima - ikakhulukazi - amahora amaningi (10,000) angaholela abantu abaningi ebuchwephesheni.
Ezinye zezindaba ezihlukile… kungani abadlali beHockey abangochwepheshe bezalwa ngokweqile ezinyangeni zokuqala zonyaka? Kungani abase-Asia bakhulu ezibalweni? Ngabe i-IQ ihlobana kanjani nempumelelo? Kungani abaseNingizimu bephuthuma ukulwa? Ubuhlanga budlale kanjani indima enkulu kangaka kwinani eliphakeme lezingozi zezindiza zaseKorea eminyakeni eyedlule? Izindlela zesimanje zokufunda ziwaguqula kanjani amathuba okuphumelela ezingane zethu?
Ukuziphatha kwencwadi kuhle kakhulu. Thina can nomthelela empumelelweni yabantu ngokushintsha indawo abahlala kuyo, abasebenza nokudlala kuyo. UGladwell unikeza umndeni wakhe njengesibonelo esihle… ekhuluma ngokuzidela okusizakale ngabanye empilweni yomndeni wakhe futhi balishintsha ingomuso kanye nempumelelo kaGladwell uqobo.
Ngiyazithanda izincwadi ezibekela inselelo imiqondo nesimo esimiyo. Lesi isiqeshana engisithandayo uGladwell. Ngidilize lencwadi futhi manje ngidinga ukuthola engingakufunda endleleni eya ekhaya!
Tags: CampfireI-Capsule CRMI-SMS ye-CatchwindUhlelo lokusebenza lwe-iphs cmsukusesha kwamazwe omhlabauhlelo lokusebenza le-iphone
May 4, 2009 ku-5: 22 PM
Kubukeka sengathi ufunde imfihlo yokubamba intshisekelo yakho – xoxa indaba emnandi. Siyabonga ngokubuyekeza.
May 4, 2009 ku-7: 47 PM
Le ngenye yezincwadi zami engizithandayo zeMalcom Gladwell. Izinto ezinhle kakhulu!
May 5, 2009 ku-8: 50 AM
Ngijabulele kakhulu ama-Outliers. Iphuzu lencwadi ukuthi bekungewona umzamo wedwa kuphela owenza umuntu aphumelele ngokumangazayo, kepha kaningi kungukuhlangana kwesimo esifanele sesikhathi nesikhathi okumele kube yingxenye yesibalo. Kodwa-ke, ngabuye ngazithola ngicabanga ukuthi ingxenye yalokho okwakwenziwa uGladwell kwakuwukuqopha izibonelo zobukhosi bukaNkulunkulu nokuthi isandla Sakhe esingabonakali sisebenza kanjani emicimbini yalomhlaba. Umbhalo ukhuluma ngendlela yena [uNkulunkulu] aphakamisa futhi adilize ngayo amakhosi nemibuso futhi asiluboni uchungechunge lwemicimbi kuze kube yilelo banga.
Ngombhalo osebenzayo, kungenza ngicabange ngokuthi ingane yami encane kufanele iqale nini ukufunda. 😉
May 5, 2009 ku-11: 16 AM
Hawu - Curt! Yebo, kulula ukukhohlwa ukuthi 'asibaphathi'. Kodwa-ke inkululeko yokuzikhethela ngicabanga ukuthi uNkulunkulu usinika amathuba nsuku zonke ukusiza labo abasizungezile. Siba ngesinye sezimo ezingaholela abanye empumelelweni. Umbuzo ngukuthi sizivula yini noma cha ukuze sisizane ngempela siphumelele.
May 6, 2009 ku-8: 43 AM
Uqinisile umngani wami. Ngemuva kwakho konke, sisindisiwe hhayi ngoba uNkulunkulu esithanda kuphela, kodwa nokwenza imisebenzi emihle yokumhlonipha nokubonga Kuye.
Okunye okufika engqondweni ukuthi impilo ephumelelayo, njengoba umhlaba uyikala, ingahle ingaphumeleli ngokweqiniso. Ngemuva kwakho konke, azikho izidumbu ezinamarack bag. 🙂
Nakekela, mngane wami.
May 7, 2009 ku-12: 19 AM
Nami ngiyithandile le ncwadi. Ikakhulukazi njengoba indodana yami endala idlala ibhola futhi ihlale ezinsukwini eziyi-15 nje kuphela ngaphambi kosuku lokunqunywa okumenza abe ngomunye wabadlali abadala kunabo bonke eqenjini adlala kulo.
Aug 24, 2009 ngo-3: 53 PM
Ngifunde isifinyezo sencwadi. Kubukeka kuthakazelisa kakhulu. Kufanele ngithole ikhophi yalo. Siyabonga ngokwabelana ngakho.
buyela ufunde kabanzi.